UBUNGAKANANI BEFESTILE ESEMGANGATHWENI (IITSHATHI ZOBUNGAKANANI KUNYE NESIKHOKELO SOBUNGAKANANI) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Ubungakanani befestile esemgangathweni (iitshathi zoBungakanani kunye nesiKhokelo soBungakanani)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kubungakanani obuqhelekileyo beewindows kubandakanya iitshathi zesayizi zeentlobo ezithandwayo kunye nobukhulu.
Amakhaya aneminyaka engama-30 ukuya kwengama-50 ubudala aqhelekileyo afakwe ngobukhulu beewindows ezisebenza kwiindidi ezininzi kunye neemilo zeewindows.
Abavelisi bachaze imilinganiselo kuhlobo ngalunye lwefestile kubukhulu obahlukeneyo. Nangona kunjalo, nokuba uthenga iifestile zekhaya elitsha okanye ezitshintsha iiwindows zenza umahluko omkhulu xa usenza iodolo.
Ulwakhiwo olutsha lwasekhaya luneefestile ezivulekileyo ezilinganiswe ngokuchanekileyo kwaye iifestile, ubukhulu becala ngokomgangatho, zilungele ukuvulwa okurhabaxa ngaphandle kohlengahlengiso.
Ngelixa ukutshintsha kweewindows, nokuba zikubungakanani obuqhelekileyo, kunokuthetha ukuba kufuneka kwenziwe uhlengahlengiso ngakumbi kwindawo esele ikhona. Ukwazi ukuba ulindele ntoni ngaphambi koku-odola iiwindows konga ixesha elininzi kunye nemali kuye nakuphi na umninikhaya.
Esi sikhokelo siqulathe ulwazi malunga nobukhulu bewindow esemgangathweni kunye nokwahluka okuninzi onokudibana nako xa uthenga iiwindows. Okubandakanyiweyo ekugqibeleni, licandelo lendlela yokulinganisa iifestile kunye noluhlu olusebenzayo lwee-FAQ's.
Yintoni ubungakanani obuqhelekileyo bewindows?
Ubungakanani bewindows ezimbini zeHung
Ubungakanani be Window engatshatanga
Ubungakanani Beefestile Zomfanekiso
Ubungakanani bewindows esityibilikisayo
Ubungakanani obuqhelekileyo bewindows
Ubungakanani bewindows Window
Ubungakanani be Window yegumbi lokulala eliqhelekileyo
Iifestile zegumbi lokuhlambela
Ubungakanani be Window Imibuzo Ebuzwa Rhoqo
Ngaba kufuneka ndibuyise zonke iiwindows zam ngexesha elinye okanye ndingazitshintsha ezimbalwa ngexesha?
Leliphi ixesha lelona xesha lifanelekileyo lokufakelwa kweewindows?
Ndingazifakela iiwindows zam ezingena endaweni yam?
Ngaba ukubuyisela iiWindows kubungakanani obufanayo neWindows yokwakha eNtsha?
Indlela yokulinganisa ukuBuyiselwa kweWindows
Xa uthengela iifestile, kubalulekile ukuba wazi ubungakanani beefestile kwikhaya lakho njengobungakanani bemigangatho yeefestile zomenzi.
Nangona kunjalo, ukuqala ngobukhulu obuqhelekileyo kuvumela isiseko sokwenza imilinganiselo echanekileyo. Abathengisi befestile banamhlanje banikezela ngenani, ukubuyisela ubungakanani bewindows ukunceda abaninimzi ukuba babone iifestile ezichanekileyo. Le nkqubo yokulinganisa iwindows yaziwa njengobungakanani besayizi yefestile.
Njengomzekelo, ifestile enye exhonyiweyo eneenyawo ezi-2, i-9 intshi ububanzi, kunye neenyawo ezintathu, ii-intshi ezine ukuphakama ingabandakanya ubungakanani bokubhala obungama-2934. amanani amabini okuqala amele ububanzi kwaye amanani amabini amabini amele ubude.
Ezi zinqaku yimilinganiselo yokwenziwa kwee-intshi ezongeziweyo ezingaphantsi okanye ngaphezulu ukubonelela ngendawo yokufaka. Umzekelo, ubungakanani bokwabelwa ubungakanani be-4444 bubonisa ifestile engama-44-intshi ububanzi kunye nee-intshi ezingama-44 ubude.
Ubungakanani bomlinganiso bunokuba zii-43 ½-intshi ububanzi nge-44 ½-intshi ukuphakama. I-intshi ine-provides ibonelela ngendawo yezinto ezidanyazayo kwaye iqinisekisa ukuba iwindow ivula kwaye ivale ngokulula.
Enye indlela ubungakanani befestile obuchongiweyo bunobungakanani boqobo be-29.5-intshi ububanzi kunye ne-35.5-intshi ukuphakama kunye nobukhulu obuqhelekileyo be-intshi ezingama-30 ububanzi kunye nee-intshi ezingama-36 ukuphakama.
Ubungakanani obuqhelekileyo bubungakanani obuqhelekileyo bewindow kwaye bobabini obu bukhulu bunokufumaneka kwiifestile ezidwelisiweyo kunye neelebheli. Abanye abavelisi banokusebenzisa amanani abo obungakanani besayizi ukuze uhlale ujonga unobhala wentengiso ngaphambi kokuba uthenge.
Ububanzi Befestile Esezantsi - Eyona iwindow ixhaphakileyo yifestile exhonywe kabini, ethi ityibilike iye phezulu naphantsi, ifunyenwe kumakhaya amaninzi. Ububanzi kwezi windows kubandakanya imilinganiselo esemgangathweni ye-intshi ezingama-24 ububanzi, 28, 32, kunye nee-intshi ezingama-40.
Ukuphakama kwefestile esemgangathweni Ukuphakama komgangatho ofanayo wefestile kubandakanya i-intshi ezingama-36, 44, 52, 54, kunye nee-intshi ezingama-62. ( Bona ngakumbi kwiitshathi zesayizi zefestile ezingezantsi .)
Apha ngezantsi kukho ubungakanani bewindows esemgangathweni eyahlukileyo iintlobo zeefestile . Xa ukulinganisa iifestile zesiko, kuyanceda ukuqala ngobukhulu obuqhelekileyo.
UHLOBO lwefestile Ububanzi UMGANGATHO UMGANGATHO EZIPHAKAMILEYO IZAZISO ZESIZULU
Ubungakanani obuPhindwe kabini beFestile yoBungakanani kunye noMlinganiso oqhelekileyo weWindows kwiWindow
(Zilinganisa ngokulinganayo ngobungakanani obuqhelekileyo)
Ubungakanani be Window yoMfanekiso 24-ngaphakathi
itheyibhile yeelekese yolwamkelo lomtshato
izipho zokukhumbula iphepha lonyaka wokuqala
Ubungakanani be Window yeSilayidi esinye Ngama-36
Ubungakanani obuqhelekileyo bewindows 12-ngaphakathi
iringi yomtshato iqhubeka ngantoni
Ubungakanani bokuvulwa kwefestile buchaza indlela i-bay okanye i-bow bow eqwalaselwe ngayo. I-Bay kunye ne-bow bow windows zinokwenziwa ngeefestile ze-casement, i-hung kabini, kunye neefestile ezizinzileyo. Ukulungiswa kweefestile zihlala zisetyenziswa xa iwindow ibonakala nje.
Ifestile yebhayi okanye iwindow evulekileyo ekhethiweyo iyakhethwa kumagumbi okuhlala, iikhikhini, kunye namagumbi okulala ajikeleza umoya. I-Bay kunye neefestile zokugoba zilinganiselwe ngokokuvulwa okukhoyo okukhoyo kwaye kwenziwa nge-sashes ezininzi.
Umahluko kubungakanani obuqhelekileyo beewindows kunye neefolo zesaphetha kusekwe kwi-engile yeefestile kunye nobukhulu beemfanta ezintathu. Ngokwesiqhelo, umbhinqo ophakathi ngu ½ ububanzi bebonke befestile kwaye amabhanti asecaleni mabini ububanzi bewindow.
UHLOBO lwefestile TYPE & ANGLE UBungakanani obuqhelekileyo
Ububanzi Be Window Ephakathi
kunye neWindows esecaleni ububanzi
Uqikelelo oluvela ngaphandle kodonga
Ubungakanani bewindows Window eseMgangathweni kunye nokuQikelela okuvela eWall I-30-Degree 3-sash Bay Ngama-36 18-ngaphakathi 10 -ku
Ngama-48 20-ngaphakathi 11/8-ngaphakathi
Ngama-60 24-ngaphakathi 13 1/8-ngaphakathi
Ngama-72 Ngama-30 16 7/8-ngaphakathi
I-45-Degree 3-sash Bay Ngama-36 18-ngaphakathi 15 3/8-ngaphakathi
Ngama-48 20-ngaphakathi 16 3/4-ngaphakathi
Ngama-60 24-ngaphakathi 19 5/8-ngaphakathi
Ngama-72 Ngama-30 23 7/8-ngaphakathi
Ubungakanani be Window esemgangathweni 12-ngaphakathi 12-ngaphakathi 1616
Ubungakanani beefestile zegumbi lokulala likhulu kuneminyaka eyadlulayo ukuvumela ukukhanya kunye nomoya omtsha kwigumbi. Kukho ubukhulu obuqhelekileyo obufunyenwe kulwakhiwo lwamakhaya amatsha kunye namakhaya akhoyo.
Apha ngezantsi kukho ubukhulu kwaye zibandakanya nokuba yeyiphi iifestile ezixhonyiweyo okanye iifestile ezixhonywe kabini, ezona ntlobo zixhaphakileyo ezisetyenziswa kumagumbi okulala. Ezinye iintlobo zeefestile zegumbi lokulala zibandakanya izilayida.
UHLOBO lwefestile Ububanzi UMGANGATHO UMGANGATHO EZIPHAKAMILEYO
Igumbi lokulala Ubukhulu 24-ngaphakathi Ngama-36
Azikho iifestile zegumbi lokuhlambela ezisemgangathweni ezizame kwaye ziyinyani ngaphandle kweefestile ezixhonyiweyo kunye neefestile ezixhonywe kabini ubukhulu bazo buxhomekeke kwindawo kunye nobukhulu bendlu yangasese.
Njengomgaqo oqhelekileyo iifestile zemifanekiso yegumbi lokuhlambela ukusuka ku-24 ukuya kuma-96 ububanzi kunye no-12 ukuya kuma-96 ukuphakama. Igumbi lokuhlambela lokutyibilika eliqhelekileyo lisusela kuma-36 ukuya kuma-84 ububanzi kwaye ukusuka kuma-24 ukuya kuma-60 ukuphakama.
Iifestile ezininzi zegumbi lokuhlambela zinxulunyaniswa nemfihlo esithetha ubungakanani obuncinci. Nangona kunjalo, kuxhomekeka kubungakanani begumbi lokuhlambela, indawo ekuyo ifestile, kunye nohlobo lwefestile, ubungakanani beewindows zeefestile ziyahluka. Amagumbi okuhlambela abonisa indawo yokusebenza encinci kunamanye amagumbi asekhaya.
Xa kunokwenzeka, ifestile enkulu yesayizi kufuneka ikhethwe kwigumbi lokuhlambela ukuvumela ukukhanya kwendalo kunye nokuhamba komoya. Ukuba igumbi lokuhlambela likumgangatho wesibini okanye wesithathu kwaye alibonwa ngababukeli okanye iifestile zommelwane, ibheyi enkulu okanye ifestile yesaphetha lukhetho olukhulu.
Amakhaya amaninzi asebenzisa iiglasi zebhloko yeglasi okanye iglasi enqabileyo ngaphezulu kwebhedi yejethi okanye kwishawari ebonelela ngasese ngakumbi. Iifestile eziqhelekileyo zangasese zibandakanya iifestile ezixhonyiweyo kunye neefestile ezixhonyiweyo.
Into entle yoyilo kwigumbi lokuhlambela yongeza iifestile ezininzi ezinjengebloko ethe tyaba yeewindows okanye ezimbini ezixhonyiweyo windows icala-ngecala ngendawo yodonga phakathi.
Mfutshane, ububanzi beefestile zokubekwa zilungile ukongeza kwinxalenye ephezulu yeshawa xa kufuneka ubumfihlo kunye nesilayidi esifutshane, esibanzi sisebenza ngokunjalo.
Inokonga imali ngaphambili ukubuyisela iifestile ezimbalwa kodwa iya kubiza ngaphezulu ukuba indlu iphela ifuna iiwindows.
Ukuthenga zonke iifestile ngolandelelwano olunye kubonelela ngezaphulelo kubathengisi kwaye iindleko zomsebenzi ukufakela iifestile ziphantsi xa indlu yonke isenziwa ngomsebenzi omnye.
Ukuze iifestile zibekho ekhayeni lakho, zisa izixhobo ezifunekayo, kwaye ulawule iishedyuli zomsebenzi, umsebenzi opheleleyo uxabisa kancinane.
Imozulu eshushu ihlala ikhethwa ukufakwa endaweni yoko. Nje ukuba iifestile ezikhoyo zisuswe, imozulu ebandayo nengalunganga ibangela iingxaki. Ukuba imozulu ishushu kakhulu, njengasehlotyeni kwiintlango eziphakamileyo zaseArizona, ubushushu obukhulu buya kungena ekhayeni lakho.
Nawaphi na amaqondo obushushu agqithisileyo anokubangela ukubamba ukutywina iifestile ukuze zingaqhubi kakuhle zikhokelela ekuvuzeni komoya kamva.
IVinyl kunye nealuminium windows, ukuba zichanekile kubushushu obugqithisileyo okanye kubanda, ziya kwanda. Oku kunokubangela izikhewu phakathi kokuvulwa ngokurhabaxa kunye nesakhelo sefestile emva kokuba amaqondo obushushu ebuyele kwinqanaba elilinganiselweyo.
Ukuba unokontraka onelayisensi kwaye unamava amaninzi, impendulo nguewe. Ukuba ungumnini wendlu ka-DIY, akucetyiswa.
Ukutshintshwa kweefestile kubonakalisa imiceli mngeni kwiifestile zokwakha ezintsha. Ukwakhiwa kwekhaya elitsha kuthetha ukuvuleka kwefestile kwangaphambili, abakhi abaziingcali, kunye nokufaneleka ngokufanelekileyo.
Ukutshintshwa kweefestile kubandakanya imilinganiselo yeefestile ezichanekileyo kunye nokwenzeka kohlengahlengiso xa iifestile zithengiwe. Ukuvulwa ngokurhabaxa kweewindows ezintsha kubandakanya ukubethelela amaphiko xa kufakwe ifestile.
Ukutshintshwa kweefestile, nangona amanzi exinekile, awufuni okanye ubandakanye amaphiko okubethela kunokwenzeka avumele ukungena kwamanzi.
Soloko usebenzisa iifestile ezinokutshintsha amakhaya akhoyo. Nje ukuba kukhutshwe ifestile, ezinye izinto ezichaphazelekayo zibandakanya udonga, ukusika, kunye nokujikeleza okubangela ukuba iwindow entsha yokwakha ingalingani ngokufanelekileyo.
Ukutshintsha iifestile kwisilayidi kwindawo ekhoyo yefestile kwaye kufuna kuphela uhlengahlengiso oluthile. Oku kuqinisekisa ukulunga okungcono. Sibhale inqaku malunga ukutshintshwa vs windows yokwakha entsha Apha.
Kwiziko lewebhu le-En Energy.gov, iziphumo zokungalungelelani kakuhle kweefestile ezibangela ukuvuza komoya kukhokelela kwilahleko enkulu yamandla.
Ubushushu kunye nelahleko yobushushu ngeefestile zinoxanduva lwama-25% -30% kwindawo zokufudumeza kunye namandla okupholisa. (Umthombo: Ezamandla.gov )
Ukuthenga iifestile ezinobungakanani obuchanekileyo kuthetha ukuthintela ukulahleka kwamandla kunye nokunciphisa iindleko zenyanga zokufudumeza nokupholisa.
Ukulinganisa ukutshintsha kweewindows akunzima njengoko kunokubavakala kodwa ukuba imilinganiselo ayilunganga, iyakubiza ixabiso eliphezulu xa iifestile ozi-odole zingalingani. Ukuba inkampani oyithengayo windows inikezela ngeenkonzo zokulinganisa simahla, bayeke benze umlinganiso.
Ukuba kufuneka uzilinganise ngokwakho, apha ngezantsi ngamanyathelo okulinganisa ukutshintsha iifestile.
Jonga ukuba iifestile zinesikwere ngokubamba umlinganiso weteyipu ngaphakathi kwefestile kwikona ephezulu ngasekunene. Tsala iteyiphu ulinganise ezantsi kwikona esezantsi ekhohlo kwaye ubhale phantsi umlinganiso, phinda oku kwaye ulinganise ukusuka phezulu ngasekhohlo kuye ezantsi ekunene. Ifestile isikwere semilinganiselo emibini okanye ngaphakathi kwe-¼-intshi enye nenye. Ukuba ayisosikwere, isakhelo siya kufuna ukulungiswa.
Linganisa ububanzi, ungabandakanyi ifestile, ngokubeka iteyiphu yokulinganisa kwicala lasekhohlo ngaphakathi kwejam kwaye uyolule ngaphakathi ngaphakathi kwejam kwicala lasekunene wenze oku kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo efestileni, embindini nakufutshane nomphezulu. nasezantsi, kwaye usebenzise elona nani likhulu kububanzi.
Ukulinganisa ukuphakama kwefestile, yandisa iteyiphu yokulinganisa ukusuka kwi-sill ukuya phezulu kuvulo lwefestile. Musa ukulinganisa kwibhodi yokutrima. I-sill kulapho i-sash yefestile ihleli khona xa ivaliwe Yenza le milinganiselo ukusuka embindini we-sill, ekunene nakwicala lasekhohlo. Thatha elona nani likhulu kwaye oku kukuphakama kwefestile.
Soloko ujonge imilinganiselo yakho kabini kwaye ukuba kunokwenzeka, yenza omnye umntu azijonge kwaye uthelekise iziphumo.
iilokhwe zomtshato ezintle nezinobukhulu
Utshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho eliphakathi
ikhitshi elimhlophe nelimnyama